‘दिनभरि ड्युटीमा हुन्छौँ, काम नै हाम्रो भ्यालेन्टाइन्स डे हो’ - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘दिनभरि ड्युटीमा हुन्छौँ, काम नै हाम्रो भ्यालेन्टाइन्स डे हो’
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार काठमान्डौ ,महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, काठमाडौँमा कार्यरत छन्, रेशमकुमार कँडेल । बर्दियाका उनले रामेछापकी सावित्रा खड्कासँग बिहे गरेको आठ वर्ष भयो । सावित्रा पनि ट्राफिक प्रहरी हुन् ।यो जोडीको एक छोरी छ ।‘अहिले दुवैको पोस्टिङ महाशाखामा छ,’ रेशम भन्छन् । उनीहरूको पहिलो भेट ट्राफिक प्रहरीको कार्यालयमै भएको थियो । ‘बुटवलबाट तालिम सकेर यहाँ आएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘उनी पनि भरतपुरको तालिम सकेर यहाँ आएकी थिइन् ।’ चिनजान भयो ।
एक करोड ५० लाख ऋण तिर्न नसकेपछि आ’त्मह’त्याको बाटो,सानो छोराको आज थियो पास्नी ! आ’त्मह’त्या गर्नु अघि जमुनाले फेसबुक स्टाटस मा उ’ल्टोबाट नाम लेखेका थिए !
आकाशमा पनि नेताको अत्याचारः सबैभन्दा धेरै सताउनेमा समाजवादी र काङ्ग्रेस !
कार्यक्रम ‘सक्किगोनी’ जि’ग्री र पाँडे न्या’य खोज्दै रविको सि’धाकुरामा…भिडियो हेर्नुहोस्
भर्खरै भुकम्प गयो केन्द्रबिन्दु गोरखा